Boqolkiiba 79 ee shacabka oo doonaya inaan meesha laga saarin bandowga habeenkii – Radio Damal
Boqolkiiba 79 ee shacabka oo doonaya inaan meesha laga saarin bandowga habeenkii
Boqolkiiba 79 ee shacabka ayaa qabo inaan xilligan la joogin waqtigii dowladda dhexe ay meesha ka saari lahayd bandowga habeenkii.
Waxay soo jeeedinayaan inaan la qaadin balse la yareeyo saacadaha uu shaqeynaya.
Bandowga ayaa jira inta u dhaxaysa 9-ka fiidnimo ilaa iyo 4-ta aroornimo.
Dareenka ayay ku muujiyeen darasaad ay sameysay shirkadda cilmi baarista ee TIFA.
Waxaa cilmi baarista lagu ogaaday in boqolkiiba 74 ee shacabka uu soo foodsaaray hoos u dhac ballaaran oo dhanka dhakhliga ah.
Arrintan ayaa loo aaneeyay bandowga habeenkii wadanka ka jiro iyo xayiraadaha dhanka safarrada ee lagu xakameynaya faafitaanka caabuqa corona.
Cilmi baaristan ayaa intii u dhaxaysay 2-dii iyo 15-kii bishii lixaad ee sannadkan laga sameeyay xaafadaha ay ku noolyihiin dadka uu dhaqalahoodu hooseeya ee Nairobi sida Huruma, Kibera, Mathare, Korogocho, Mukuru kwa Njenga, Kawangware iyo meelo kale oo ka tirsan caasimadda dalka.
Waxaa darasaadkan ka qeyb galay rag ah boqolkiiba 53 iyo haween ah boqolkiiba 47 waxaana ugu badnaa dad ay da’dooda u dhaxayso 25 ilaa 35 sano.
Boqolkiiba 86 ee dadka la wareystay waxay taageereen go’aanka madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta uu 6-dii bishii hore ku kordhiyay mudada tallabooyinka lagu xakameynaya cudurka .
Boqolkiiba 32 ee haweenka ay TIFA wareysatay waxay sheegeen inay shaqo la’aan yihiin marka la barbardhigo ragga oo ah 29 boqolkiiba.
Sido kale boqolkiiba 12 ee haweenka ayaa xusay inay si iskood ah u shaqeystaan halka tiradan ragga ay yihiin boqolkiiba 18 .
Darasaadkan ayay dadka kaga qeyb qaateen wicitaannada taleefoonka .
Sido kale shirkadda TIFA ayaa sheegtay in kala fogaanshaha dadka , xayiraadda in la galo ama laga soo baxo meelaha kiisaska ugu badan ee coronavirus laga diiwaangeliyay iyo baaritaan wadareedka ay yihiin siyaabaha ugu waxtarka leh ee lagu xakameeyay cudurka boqolkiiba 24, 19 iyo 13 .
Sido kale xirashada maaskarada ama afxirka , isku imaatinka dadweynaha la mamnuucay iyo isticmaalka gacma nadiifiyaha ayaa darasaadka lagu sheegay inay boqolkiiba 2 yareyeen faafitaanka cudurka.
Faaiidada laga helay in guriyaha lagu sugnaado ayaa ah boqolkiiba 8, bandowga habeenkii boqolkiiba 9 halka baaritaannada dadka fayraska looga shakiyay iyo kuwa amarrada jabiya lagu tilmaamay boqolkiiba 4.